पूर्वगभर्नर नेपालको ‘बीपी कोइरालाको आर्थिक विचार’ पुस्तक लोकार्पण - हरियाली नेपाल
# राप्रपा महाधिवेशन ‘प्रचण्ड’ माओवादी केन्द्र सर्वोच्च #राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड # काँग्रेस महाधिवेशन कोरोना
काठमाण्डौंः पूर्वगर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपालद्वारा लिखित पुस्तक ‘बिपी कोइरालाको आर्थिक विचार’ सार्वजनिक भएको छ ।
डा. नेपालले पुस्तकमा आफूलाई बीपीले भनेका आर्थिक उन्नतिका तथा आर्थिक सोच र विचार पुस्तकमा उल्लेख गरे । पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वगर्भनर नेपालले नेपाली कांग्रेसले २०४८ सालयता आर्थिक र प्रजातान्त्रिक दृष्टिकोण दिन नसकेको बताएका छन ।
उनले विश्वमै ख्याती कमाएका नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले स्थापना गरेको पार्टीमा कुनै विचार नै नहुनु राम्रो नहुने बताए । डा. नेपालले बीपीको दूरदृष्टि र स्पष्ट विचार बोकेर हिँडेको पार्टी आज तानाशाही र कम्युनिस्टभन्दा फरक बन्न नसक्नु चिन्ताको विषय भएको बताए ।
कुन रूपमा आर्थिक दृष्टिकोणमा, प्रजातान्त्रिक दृष्टिकोणमा कसरी फरक भनेर हिजोको दिनमा विश्वेश्वरप्रसाद कोईरालाले त्यसरी स्पष्ट देखाएर हिँडेको पार्टी आज हामी कम्युनिस्टभन्दा पनि फरक हुन सकेनौँ । तानाशाहीभन्दा पनि फरक हुन सकेनौँ । झनै फलो गर्दै उनीहरूको काम गर्दै गयौँ । पार्टीमा नयाँ जेनेरेशन आउँदैछ, यसले ठूलो अन्याय हुन्छ । विश्वमै चर्चित सोच भएर ख्याति कमाएको मानिसले सिर्जना गरेको पार्टीमा अहिले विचारै छैन । न आर्थिक विचार छ न प्रजातान्त्रिक विचार’ उनले भने ।
कार्यक्रममा उद्योगपति तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले आफ्नै खुट्टामा उभिनसक्ने राजनीतिक कार्यकर्ता नभएसम्म सही नेता नजन्मिने बताए । उनले पुस्तकमा भनेका बीपीका कुरा अहिले पनि उत्तिकै समय सान्दर्भिक रहेको बताए । सांसद चौधरीले राजनीति पेशा नभइ सेवा गर्ने माध्यम हो भन्ने बीपीको भनाइ आज पनि उत्तिकै सान्दर्भीक भएको बताए ।
‘विश्वले चिनेको त्यो स्केलको राजनीतिज्ञ नेपालमा कहिल्यै पनि जन्मिएन । भविष्यको बारेमा भन्न कठिन छ । उनले भनेका के कुरामा मलाई अझ पनि सान्दर्भिकता लाग्छ भने राजनीतिक भनेको प्रोफेशन होइन । राजनीति भनेको सेवा गर्ने माध्यम हो,’ उनले भने ।
सांसद चौधरीले बीपीजस्तो दूरदर्शी नेता नेपालमा अहिलेसम्म पनि जन्मिन नसकेको बताए । फरकधारबाट